आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१२ आषाढ २०७६ बिहीबार, २७ जुन २०१९)
‘जय जगत्’ अभियानका अभियन्तासँग शान्ति समाजको छलफल
टर्की र ग्रिस पठाइदिन्छु भनी ठगी, कमलप्रसाद पक्राउ
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 8 months ago June 26, 2019
श्री सूर्योत्तरायणे श्रीशाके १९४१ नेपाल सं. ११३९ परिधावी नामक सम्बत्सर वर्षा ऋतु वि.सं. २०७६ आषाढ १२ गते तद्अनुसार सन् २०१९ जुन २७ तारीख बिहीबार आषाढ कृष्णपक्ष दशमी तिथि अश्विनी नक्षत्र अतिगण्ड योग वणि करण आनन्दादिमा मित्रयोग चन्द्रमा मेष राशिमा । काठमाडौंमा सूर्योदय विहान ५ः१२ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १९ः०२ मा हुनेछ । शुभ समय अभिजित ११ः३९ देखि १२ः३४ । अशुभ समय राहुकाल १३ः५१ देखि १५ः३५ ।
मेष राशि – कार्यमा सफलता मिल्नेछ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । सुख सम्पति मान महत्वमा बढोत्तरी होला । आमोदप्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त होला । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । परिवारजनसित मिलेर पिकनिक पार्टी आदि जाने दिन छ । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । आरोग्यता बढ्ला । यश ख्याति फैलिनेछ । मांगलिक कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ ।
बृष राशि – खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । भागदौड चलिरहनेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुनेछ । शारीरिक रआर्थिक जोखिमपूर्ण कार्यप्रति सचेत रहनु उचित होला । खर्च बढ्नेछ । आरोग्यताप्रति ध्यान राख्नुपर्नेछ । आर्थिक कार्यमा सचेत रहनुपर्नेछ ।
मिथुन राशि – यात्रामा सफलता मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । लगानी उठ्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनु हुनेछ । हांसविलासमा रुचि बढ्ला । कार्यव्यापारमा प्रगति होला । प्रेम पात्रसित मिलन हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम पनि बन्नेछ । इष्टमित्र सन्तान आदिका साथ पाउनुहुनेछ । पारिवारिक कलह शान्त हुनेछ । मान महत्व बढ्नेछ । गीत–संगीतमा आकर्षण बद्नेछ ।
कर्कट राशि – मान महत्व बढ्ला । भोजभत्तेरमा भाग लिनु हुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । भागदौड व्यस्तताको प्रतिफल मिल्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । देखापरेको समस्याको समाधान खोज्नुहुनेछ । विवादमा पर्नु र जोखिममा पर्नु उचित हुनेछैन । कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय र ठुलो रकमको लगानीप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
सिंह राशि – शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा सफलता मिल्नेछ । धर्मकर्ममा रुचि बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । लगानी उठ्ला । खेलकूदमा भाग लिनुहुनेछ । यात्रा गर्नुहुनेछ । सुख आनन्द बढ्ला । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुख सम्पदा बढ्ला । आरोग्यता वृद्धि होला । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । ऐश्वर्व बढ्नेछ । बौद्धिक रचनात्मक र कलात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सुख शान्ति बढ्नुको साथै कार्यमा सफलतमा मिल्नेछ ।
कन्या राशि – समस्याको समाधान मिल्नेछ । जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । भ्रमण बढ्नेछ । विवाद आदिमा नपर्नु उचित रहला । अरुको भरभन्दा आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु उचित हुनेछ । ऐनकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत रहनुपर्नेछ ।
वृश्चिक राशि – धन सम्पति बढ्ला । साहसिक काम बन्नेछ । मान महत्व बर्चश्व बढ्नेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । सुख आनन्द बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । विजयश्री प्राप्त होला । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख सुविधाको वस्तु किन्नु हुनेछ । योजना र बजेट बनाइ कार्य बेस होला । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमतामा वृद्धि होला ।
धनु राशि – सुख सफलता बढ्नेछ । अन्नधनमा वृद्धि हुनुको साथै आयस्रोतमा पनि बढोत्तरी होला । रोकिएको काम बन्नुसँगै उधारो लगाइएको धन पनि उठ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य काम बन्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । गीत–संगीत र रसरागात्मक काममा आकर्षण बढ्नेछ । इष्टमित्रको साथ मिल्नेछ । सन्तान सुख बढ्ला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला ।
मकर राशि – ऋण रोग र शत्रुलाई उपेक्षा नगर्नु उचित होला । नियम–कानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ला । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुनेछैन । भएको दायित्वलाई पूरा गर्नु हुनेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित नहोला । योजना र बजेट बनाई काम गर्नु बेस रहला ।
कुम्भ राशि – कुनै पनि प्रकारको शारीरिक र आर्थिक विकाससित सम्बन्धित कार्यमा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य पनि बन्नेछ । नयाँ आयस्रोत वर्द्धक काममा सफलता पाउनुसंगै इष्टमित्र र सन्तानको सुख मिल्नेछ । लगानी उठ्ला । रोकिएको काम बन्नेछ । आरोग्यता र ऐश्वर्य वृद्धि होला । साझेदारीको काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला ।
मीन राशि – आफन्तको साथ मिल्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । सुख आनन्द बढ्ला । मिठो भोजन मिल्ला । साझेदारीको काम बन्नेछ । सुख सुविधाको वस्तु बढ्नेछन् । सुख विलास पनि बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जीत्ने सामर्थ्य बढ्ला ।
बीपी वनबाटिकामा बीपीको पूर्णकदको शालिक निर्माण